Maqaal: Doorkii Ay Gashaantidu Ku Lahayd Dhaqanka Soomaalida !! – Horn Cable Tv
0	March 23, 2020 10:11 am
Inantu marka ay dhalato waxay soo martaa marxalado ay Soomaalidu u taqaano inan, Dhooray, Foodley, Seeman, Inan timo-tidcan ama Gashaanti. Marxaladahaasi waxay nolosha inanta ku kala leeyihiin masuuliyado ay kula qaybsato hawl-maalmeedka qoyskooda. Marka ay raad-qaado inta laba kabood oo maas ah oo wiiqda haya loo soo tolo ayaa ul yar loo dhiibaa, si ay u celiso Maqasha ama Naylaha imminka dhashay ee loogu talogalay inay ku ababaan kambalka Guriga.
Foodlay ama Dhooray oo ah marxaladda inanta lagu aamino inay adhiga raacdo, waxay daajisaa kaymaha ugbaadka leh iyo dooxooyinka, si adhigoodu u yeesho gashi iyo qurux caano badana u dhiiqo.
Sida uu ii sheegay dhaqan-yaan Mawliid Aadan Biixi, marlaxadda la yidhaahdo Seeman waa xiliga inanta laga xiiro dhoorka ee loo diyaarinayo in ay u soo baxaan timihii dheeraa ee lagu tilmaansan jiray Inan timo-tidcan. Filkan ama xiligan masuuliyadda inantu way korodhaa, waxaanay dusha u ridataa lisidda xoolaha iyo ciirta oo ay lusho iyo waxii la hal maala.
Waxa kale oo ay ka shaqaysaa diirista maydhaxda, gurista Cawska, soo bixinta Dhigaha, soo goynta Duurka oo Kabdaha, Cawsaska iyo Aqal Soomaaliga lagu dhiso, waxayna ku soo ururisaa Buul-yaraha oo ah halka ay Gashaantidu ku qaabisho asxaabteeda.
Kartida iyo baarinimada inantan Timaha-tidcan, waxaa laga dareemi jiray arlada iyo deegaannada Mawluhu ka beeray, waxaanna sahanka ka laba-celin jiray Soddoho iyo Odayaal maal badan haysta oo wiilal ay dhaleen u ilaalo-tag ah, waxa aan iyaguna meesha ka maqnayn caa’ilad hiddaysanaysa tafiirtii qoysnimo ee ka dhexaysay. Waxaa iyaguna dhinacooda ka ilaashanaya dhallinyaradii ay wada barbaareen ee ay wada caddalooli jireen, isla markaana xiliyada la Ciyaar tumayo ay u mari jirtay.
Aabbaha iyo hooyada dhalay gashaantidan, waxay si dhow ula socdeen dhaqdhaqaaqa iyo nux-nuxda dhoorayda reerku ku warranto, si ay u ogaadaan ciddii Dhaanka la rartay ama Awrta la soo caraabisay, waxayna ka dhursugayeen in Inantooda mar uun laga xoolo-qaadan doono oo xeradooda ay soo geli doonaan geel Yarad ah oo Rag Dhaqasho iyo kartiba lagu majeerto oo ay inantooda la caashaqsanaayeen.
Inanta hooyadeed waxay ku tababari jirtay sidii qoyskaas ay u dhaxday dhaliil ama xoolo mooganaan aanay ugu xaman lahayn gashasantida waxaa laga shaqayn jirey muuqaalkeeda dhinaca quruxda taas oo cuntooyinka qaar aan loo ogolayn si aanay u yeelan hilib qotonkeeda wax u dhimi kara waxyaabahii ka mamnuuca ahaa waxaa ka mid ahaa Shaaha iyo Baruurta, xiliyada la ducaysto na hilbaha ay qaybta u lahayd waxaa ka mida Misigta iyo Shanshada oo jiidh u badan.
Qiimaha Soomaalidu ay u hayso xididnimada ayaa ah meeqaamka ugu sareeya ee wax la isugu noqdo, waana la isku caawin jiray, la isku martiyi jiray, la isku magan-galin jiray, laguna nabdaadi jiray, la iskuna dhibaadin jiray oo haddii ay inani reer kaaga jirto, waxa lagugu qaddarin ogaa martabada u saraysa.
Qormadani waxay dhiirigelinaysaa qiimihii iyo milgihii ay Gashaantida ama Inanta Timo-tidcani lahaan jirtay iyo sidii quruxda badnayd ee ay isku qaddarin jireen labada reer, qoys ama qabiil ee ay inani isku xidhay, balse waxa hadda muuqata in dunidan dhaqamadoodii isku milmeen ay sabab u noqonayaan inay sii wiiqmayso qiimihii iyo sharafkii Inantu lahaan jirtay, taasina ay saamayn wayn ku yeelatay dhaqanka iyo asluubtii wanaagsanayd ee bulshadeennu lahaan jirtay.
Opinion 35 Somali News 4098
Imaaraadka Oo Joojiyey Duulimaadyada Iyo Sucuudiga Oo Soo Rogay Bandoo, Cabsida Coronavirus Awgeed